DEG DEG: MW Farmaajo oo sheegay inuu dhaqse usoo magacaabayo RW cusub | Hadalsame Media
Home Wararka DEG DEG: MW Farmaajo oo sheegay inuu dhaqse usoo magacaabayo RW cusub
DEG DEG: MW Farmaajo oo sheegay inuu dhaqse usoo magacaabayo RW cusub
(Muqdisho) 25 Luulyo 2020 – War kasoo baxay Madaxtooyada Villa Somalia ayaa lagu soo dhoweeyey war sheegayey inuu Baarlamanku kalsoonidii kala laabtay RW Somalia, Md Xasan Cali Khayrre, iyadoo War Saxaafadeedka lagu caddeeyey wax lagu sheegay ”khilaaf soo kala dhex galay” Xukuumadda iyo Golaha Shacabka.
”Madaxweynaha Jamhuuriyadda Fedraalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullahi Maxamed Farmaajo waxaa soo gaartay go’aanka ay Xildhibaannada Golaha Shacabka codka kalsoonida kala noqdeen Xukuumadda Ra’iisul-Wasaare Xasan Cali Kheyre,” ayuu warku ku bilaabmayaa.
”Madaxweynuhu wuxuu muhiim u arkayay midnimada hay’addaha Dastuuriga ah ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, gaar ahaan marxaladda aan ku jirno, balse asagoo gudanaya waajibaadkiisa Dastuuriga ah, tixgelinayana awoodda Dastuuriga ah ee Golaha Shacabka, wuxuu aqbalay go’aanka Golaha Shacabka.
“Kala fogaanshaha Xukuumadda iyo hay’adda sharci dejinta waa mid wiiqeysa horumarkii la sameeyay, si taas loo daba qabtana waxaan go’aansaday inaan tixgeliyo codka Golaha Shacabka oo ah hay’adda aasaaska u ah qarannimadeenna.
”Madaxweyne Farmaajo wuxuu si degdeg ah usoo magacaabayaa Ra’iisul Wasaare soo dhisa xukuumad dalkan ka saarta marxaladdan kala guurka ah, siina xoojisa adeegyada bulsho ee dalka.
”Madaxweynaha Jamhuuriyadda wuxuu uga mahadcelinayaa Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre hawlkarnimadii uu muujiyay muddadii uu xilkan hayay iyo wadashaqeyntii wanaagsanayd ee uu la lahaa hay’adaha Dowladda Federaalka Soomaaliya, isaga oo u rajeeynaya horumar iyo mustaqbal wanaagsan.” ayaa lagu soo afjaray War Saxaafadeedka Madaxtooyada.
Previous articleMaxay Farmaajo & Khayrre u dhalaysaa tillaabada uu qaaday Baarlamanka Dhexe?
Next articleRW Khayrre ma qaatay talo uu 3 bilood kahor siiyey siyaasiga CCW, maxay se ahayd?